Ka dib shirkii Berlin ee 1884, Talyaanigu waxay isu diyaarinayeen inay gumaystaan ​​Itoobiya. Waxay isku dhaceen muwaadin Itoobiyaan ah oo Menelik II ah, oo halganka naxariis darada ah kula jiray.
Si loo jilciyo iska caabinta Itoobbiyaanka ee ku sii kordhay cadho ka dhan ah iyaga, sanadkii 1887, Talyaanigu wuxuu ka keenay laba lo 'Bombay Hindiya, oo loo yaqaanay inuu ku dhacay viruska' rinderpest virus 'oo aan waligiis dhulka ka jirin. Afrikan ka hor wakhtigaas. Ujeeddadu waxay ahayd in dhakhso loo dhinto lo ': lo ', ido, ari iyo xayawaan duurjoog ah sida ka badan geesaha, geedaha iyo geesaha.
Fayraska lo'da ayaa ku faafay oo dilay ku dhawaad ​​dhammaan xayawaanka ku nool Itoobiya. Fayraskan xitaa wuxuu gaadhay Bartamaha Afrika dhawr bilood gudahood. Dhimashada xooluhu waxay carqaladeeyeen beeraha waxayna sababaan abaar baahsan oo ku baahsan dalka Itoobiya. Taariikhyahanadu waxay rumeysan yihiin in saddex-meelood laba meelood tirada dadkaEritrea deriska ayaa waxaa ku dhacay macluul daba socota.
Dhimashadu si dhakhso ah ayey ugu faafay dhammaadka Kenya. Tirada dhimashada waxaa sii kordhiyay daacuun ka fiday waqooyiga ilaa koonfurta. Tani waxay baabi'isay awoodda dagaalka ee Emperor Menelik II. Itoobiyaanku way iska caabiyeen ilaa dagaalkii Adwa ee 1896, oo calaamad u ah iska hor imaadki ugu dambeeyay ee dhex maray gumeystihii Talyaaniga iyo jinsiyadihii Itoobiya ee uu hogaaminayay Emperor Menelik II oo eryay bishii Maarso 1, 1896 intii lagu jiray dagaalkanAdwa.
Guul weyn ayey u ahayd Itoobiyaanka iyo guushii ugu horreysay ee ciidda Afrika. Dagaalkan ofAdwa ee 1896 wuxuu aad muhiim ugu noqday Wadaniyiinta Afrika. Dagaalkani wuxuu saameyn ku leeyahay bini-aadamka horumarka leh wuxuuna kiciyaa halganka xorriyadda. Waa dambi kale oo dagaal iyo dambi ka dhan ah aadanaha oo ka socda Galbeedka aan la diiwaangelin, ee Degayaasha Talyaanigu ay ku kaceen isku daygoodii 1aad inay gabi ahaanba baabi'iyaan Itoobiya oo ay ka abuuraan Boqortooyo Talyaani ah oo ku taal Bariga Afrika. . Ku alla kii hilmaam taariikhdiisi hore waxaa lagu xukumay inuu dib u soo nooleeyo.
Sep29 08: 44